भाउजुसँग चिकेको सत्य कथा
मेरो नाम संगित हो म २४ बर्षको भएँ । म काठमाण्डौको गाउँमा एउटा बृहत परिवारमा जन्मिएको हुँ । मेरो घरमा ३ जना दाजुभाइ र ४ जना दिदि छन र म सबै भन्दा कान्छो छोरो हुँ । मेरो जेठो दाइ र मेरो उमेर १३ बर्षको फरक छ । उहाँको विबाह २० बर्षको उमेरमा नै भएको थियो। विबाहपछि भाउजुले १ छोरी र १ छोरा जन्माउनु भयो । दाइ समय-समयमा कामको सिलसिलामा धेरै समय बाहिर बस्ने गर्नु हुन्थ्यो । समय बित्दै जाँदा म पनि बिस्तारै ठुलो हुदै गएँ ।
१४/१५ लाग्दासम्म मलाइ यौनको बारेमा थाहा थिएन तर साथीहरूले कहिले काँही कुरा गर्ने गर्थे र हस्तमैथुनको बारेमा पनि भन्ने गर्दथे तर मैले त्यतिबेला सम्म हस्तमैथुन पनि गरेको थिइन । तर पनि कहिले काहि भाउजुले नुहाउदा वा सुतेको बेलामा भाउजुका सेता तिघ्रा देख्दा कस्तो कस्तो अनुभव हुन्थ्यो । यस्तैमा एक दिन दाइ कामको सिलसिलामा १ हप्ताको लागि बाहिर जानु भएको थियो । दाइ नहुँदा म प्राय दाइको कोठामा नै सुत्ने गर्दथे त्यसैले त्यस दिन पनि म दाइको कोठामा नै सुते । कोठामा म खाटमा र भाउजु भुईमा नानीहरूसंग सुत्नु भएको थियो । भाउजु सुत्दा जहिले पनि म्याक्सी लगाएर सुत्ने गर्नु हुन्थ्यो । त्यस दिन करिब १२:०० बजे तिर अचानक मेरो आँखा खुल्यो । कोठामा सानो मधुरो लाइट बलिरहेको थियो । मैले भाउजु तिर हेरे, भाउजुको म्याक्सी माथि तिर सरेर लगभग तिघ्राको माथिल्लो भाग सम्म पुगेको थियो र भाउजुका सेता तिघ्राहरू प्रष्ट रुपमा देखिइरहेका थिए ।
यो देखेर मलाई अनौठो अनुभव हुन थाल्यो र म साथीहरुले भनेका कुराहरू सम्झन थाले । म उठेर भाउजु नजिक गएर भाउजुका तिघ्रालाइ हातले छोए । अनि बिस्तारै भाउजुको म्याक्सीलाई अझ माथि तिर सारे । भाउजुले प्यान्टी लाउनु भएको रहेनछ यसैले भाउजुको भुत्लाले ढाकेको पूती देखिइहाल्यो । मैले यो नै आइमाई मान्छेको पूती देखेको पहिलो पटक थियो । मलाई भाउजुको पूती छुन मन लाग्यो तर डर पनि लागि रहेको थियो कि कतै भाउजु उठ्नुहोला कि भन्ने । मैले आँट गरेर भाउजुको पूती तर्फ हात बढाएँ र छोए पनि । तर भाऊजु गहिरो निन्द्रामा हुनाले थाहा पाउनु भएन । मेरो हौसला अझ बढ्यो र मैले भाउजुलाई चिक्ने बिचारले मेरो ट्राउजरलाई तल सारेर लिङ्ग बाहिर निकाले । मेरो लिङ्ग फुलेर कडा भइसकेको थियो तर छिक्दा त भाउजुले थाहा पाउनु होला भन्ने डर लाग्यो अनी भाउजुको पूती हेर्दै लिङ्ग लाई समातेर साथीहरूले भने जस्तै गरी हल्लाउन थाले । एकछिन हल्लाएपछि मेरो लिङ्गमा अनौठो अनुभव हुन थाल्यो र मेरो लिङ्गले भाउजुको तिघ्रा र पूती वरीपरी विर्यपात गरिदियो । यस पछि म एउटा कपडाले लिङ्ग पुछेर सुते । भोलिपल्ट बिहान उठेर स्कुल गएँ तर मलाई भाउजुले थाहा पाएर केही भन्ने होकि भन्ने डर लागिरहेको थियो तर त्यस्तो केही भएन ।
यसको २/३ दिन पछि म बिहान स्कुल गएर फर्कदा घरका सबैजना हाम्रो एक जना आफन्तको छोरीको विवाह भएकोले विवाहको लागि अर्को गाउँमा जानुभएको रहेछ । भाउजु चाहीँ घर कुर्न भनेर घरमै बस्नु भएको रहेछ । भाउजुले मलाई खाना खान दिनुभयो । मैले खाना खाइसकेर उठेँ । भाउजु पनि काम सकेर नुहाउन थाल्नुभयो । भाउजु बाहिर आगनमा नै पेटिकोट मात्र लगाएर नुहाउन थाल्नु भयो । मलाई पनि भाउजुका माल हेर्ने स्वाद परिसकेको थियो यसैले गफ गर्ने बहानामा नजिकै बसे । भाउजुलाई सायद म सानै छ भन्ने लागेर हो वा अरू कारणले हो मसंग लाज नमानी म संग गफ गर्दै नुहाउन थाल्नुभयो । भाउजुको पेटिकोट पातलो भएको र भिजेको कारणले भाउजुका मालहरू केही रुपमा देखिई रहेका थिए । अनी भाउजु पेटिकोटको इजार खोलर भित्र हात पसाउदै माड्न थाल्नु भयो तर अचानक भाउजुको हातबाट पेटिकोट फुत्कियो र तल झर्यो । भाउजु मेरो अगाडी पूर्ण रूपमा नाङ्गो हुनु हुन्थ्यो । भाउजुलाई नाङगै देखे पछि मेरो लिङ्ग रन्किइहाल्यो । तर म आफुलाई सम्हाली रहेँ । भाउजुले आतिंदै पेटिकोटलाई माथि उठाएर आफ्नो नाङ्गो शरीर छोप्नु भयो । अनि भाउजुले आफुलाई सम्हाल्दै हतार हतार नुहाई सकेर कपडा बदल्न थाल्नु भयो । भाउजुले कपडा बदल्दै गर्दा मलाई भन्नु भयो "बाबु मलाई नाङगै देखेको कुरा कसैलाई पनि नभन्नु ल", मैले हुन्छ भने । त्यसपछि म भित्र गई टिभी हेर्न थालेँ भाउजु पनि पनि कपडा धुने साबुन लिनको लागि आउनुभयो । त्यसबेला भाउजुले पेटिकोट मात्र लागाई पेटिकोटले नै आफ्नो स्तन सम्म छोप्नु भएको थियो । म टिभीमा एउटा अंग्रेजी फिल्म हेरिरहेको थिए त्यहिबेला फिल्ममा यौन सम्पर्क गरिरहेको दृष्य आइरहेको रहेछ । मैले हतार-हतार च्यानल बदल्न थाले । म हडबडाएको देखेर भाउजुले मुस्काउदै सोध्नु भयो "बाबु किन आतिनु भएको ?" मैले भने "फिल्ममा फोहर दृष्य आयो अनि" अनि भाउजुले फेरी भन्नु भयो "तपाईले अहिलेसम्म यस्तो (सेक्स) गर्नु भएको छ कि छैन?" मैले आफुले सेक्स नगरेको तर त्यस रात भाउजुको पूती देखेर हस्तमैथुन गरेको कुरा बताई दिए । भाउजु टिभीमा यस्तो देखेर जोसिनु भएछ की क्याहो उहाँले मलाई भन्नु भयो "म तपाईलाई यस्तो गर्न सिकाईदिन्छु तर कसैलाई नभन्नु ल ।" यस्तो कुरा गर्दै गर्दा मलाई पनि सेक्स गर्ने इच्छा भईसकेको थियो र मेरो लिङ्ग कडा भईसेको थियो, यसैले मैले हुन्छ भने । त्यसपछि भाउजुले खाटमा बसी मेरो ट्राउजर र पेन्टी तल सारेर मेरो लिङ्ग खेलाउन थाल्नु भयो र हाँस्दै भन्नु भयो "बाबु तपाईलाई केही थाहा नभए पनि यसलाई त सबै थाहा भैसकेछ त, यो त सेक्स गर्न तयार भएछ त" । मेरो लिङ्ग पहिला नै ठन्किसकेको भाउजुले चलाएपछि रन्किएर कडा झन भयो । अनि भाउजु खाटमा उत्तानो परेर सुती आफ्नो पेटीकोटलाई माथी तिर फर्काउनु भयो ।
भाउजूले भर्खर नुहाउनु भएकोले प्यान्टी पनि लगाउनु भएको थिएन यसैले भाउजुको बाक्लो रौंले ढाकेको पूती देखिईहाल्यो । भाउजुले मलाई उहाँको पूती खेलाउन भन्नुभयो । अनि मैले ट्राउजर र पेन्टी फुकाली खाटमा चढेर भाउजुको पूती खेलाउन र पूती भित्र औंला पसाउन थाले । एकछिन खेलाएपछि भाउजुको पूती रसाउन थाल्यो । त्यसपछि भाउजुले आफ्नो खुट्टा फट्याउदै मलाई उहाँ माथि चढ्न भन्नुभयो । म भाउजु माथि चढे अनि भाउजुले मेरो लिङ्ग समाएर आफ्नो पूती च्यात्दै अलिकति पसाउनु भयो र मलाई भित्र घुसाउन भन्नुभयो । मैले लिङ्गलाई भित्र तिर ठेले तर छिरेन अनि अलि बल लागाएर ठेलें भाउजुको पूतीमा पानी आएर चिप्लो भइसकेकोले मेरो लिङ्ग एकैपटक भाउजुको पूतीभित्र पुग्यो, तब भाउजु चिच्याउनु भयो मेरो पूती नै च्यातिदिने बिचार छ कि के हो?" म डराउँदै लिङ्गलाई बाहिर निकाल्न खोजेँ तर भाउजुले मलाई भन्नु भयो "बाहिर न निकाल्नुस, अब भित्र बाहिर गर्नुसन तर बिस्तारै गर्नुस ल, तपाईको हतियार ठुलो रहेछ ।" म मेरो लिङ्गलाई भाउजुको पूतीको भित्र बाहिर गर्दै भाउजु माथि मच्चिइन लागें । केहि समय मच्चिए पछि मेरो लिङ्गमा अनौठो अनुभव हुन थाल्यो र मेरो लिङ्गले भाउजुको पूती भित्र पिच्कारी मारीदियो । अनि म एकछिन भाउजुमाथि नै सुतिरहे । केहीबेर पछि भाउजुले मलाई हटाउँदै भन्नु भयो "कस्तो लाग्यो त?" मेलै भने धेरै मज्जा भयो भाउजु तर मलाई फेरी एक पटक गर्न मन लागिराछ । भाउजुले हास्दै ओहो बल्ल ठुलो हुन थाल्नु भएछ मेरो बाबु भन्दै मेरो लिङ्गलाई फेरी खेलाउन थाल्नु भयो । भाउजुले केही समय खेलाएपछि मेरो हतियार फेरी लड्नको लागि तयार भयो । अब भाउजुले मलाई उत्तानो परेर सुत्नभन्नु भयो । अनि मेरो लिङ्ग समाई आफ्नो पूतीमा छिराऊँदै म माथि बस्नुभयो । भाउजुको पूती पहिलेदेखी नै चिप्लो भएकोले मेरो लिङ्ग सजिलै भित्र छिर्यो । त्यसपछि भाउजु मच्चिन लाग्नुभयो । म चाही पेटिकोटबाट हात छिराएर भाउजुको स्तन खेलाउन लागे । केही समय मच्छिएपछि भाउजु म थाके भन्दै उठ्नुभयो । अनि भाउजु खाटबाट तल झरी भित्तमा अढेसा लाग्दै अब यसरी उठेरै गरौं भन्नुभयो । म पनि खाटबाट झरेर भाउजुको पेटिकोट फर्काउन थाले तर भाउजुले अरे बुद्धु यो नै खोल्नुहोस न भन्दै इजार खोलेर आफ्नो पेटिकोट खोल्नुभयो । अब मेरो अगाडी भाउजु पुरै नाङ्गै हुनुहुन्थ्यो अनि मैले मेरो लिङ्ग समाती भाउजुको पूतीलाई च्यातेर भित्र छिराएर उभिएरै चिक्न थाले । केही बेरको चिकाईपछि मैले फेरी भाउजुको पुती भित्रै विर्यपात गरिदिएँ । त्यसपछि हामी दुबैले एउटा कपडाले आ-आफ्नो यौनाङ्ग सफा गर्यौँ । अनि भाउजुले पेटिकोट लगाउनु भयो र बाहिर गएर म्याक्सी पनि लगाई कपडा धुन थाल्नुभयो । म पनि कपडा लगाएर भाउजु नजिक गई गफ गर्न लागें । त्यस दिनपछि अहिलेसम्म मैले भाउजुलाई धेरै पटक चिकीसकें । हाम्रो घरमा धेरै जना हुनाले प्राय समय नमिले पनि हामी समय मिल्ने बितिक्कै यौनको खेल खेल्न शुरु गरी हाल्छौं ।
भाउजुसँग चिकेको सत्य कथा 2017-06-09T10:40:00+05:45 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Miracle Teen Team
Miracle Nepal - Multilingual Sex Story Website: भाउजुसँग चिकेको सत्य कथा